မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: တို့ဖေဖေ
Posted by mabaydar at 2:17 AM
ကျနော်က အဖေဆိုတာ ငယ်ငယ်တည်းက သိဝူး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာလေးကို ခံစားသွားပါတယ်
ဂိမ်းကတော့ ကျနော် ဆော့လေ့မရှိတော့သိဘူးနော်
10/23/2011 3:50 AM
Happy Birthday Ma Baydar's daddy...
Happy Birthday, Ma Baydar's Phay Phay!
Happy Birthday to your Dad sis... :D
အလုပ်မှာ တွေ့ဖူးတဲ့ မြန်မာတော်တော်များများက စကားပြောရင် စည်း သိပ် မစောင့်ကြဘူး...
Casual comment တွေ သိပ်များတယ်...
၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်း ရိုက် သလို ဖြစ်နေရင် ခွင့်လွှတ်...
10/23/2011 2:06 PM
ချစ်သောမိသားစုနဲ့ ထာဝစဉ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ...း)
10/23/2011 8:52 PM
ညီမလေး စာတွေ အရင်က မဖတ်ဘူးဘူး.... ခုတလော ဖတ်မိတော့ ပို့စ်လေးတွေ အားလုံးကြိုက်လို့ ဖတ်နေတာ ညကတောင် ၃နာရီ ထိုးသွားတယ်.....
10/26/2011 9:17 PM
အောင်မင်းဦး၊ :P ၊ မိစံ ၊ nm ၊ Candy ခုလို ဆုတောင်းပေးပြီး မန့်ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...
Anonymous ဟုတ်တယ်... စကားတစ်ခွန်း ကောက်ချက်ချတယ်ဆိုတာကို စည်းကမ်းရှိသင့်တယ်... ကိုယ့် အမြင်နဲ့ပဲကြည့်လို့မရဘူး... ဘာပဲပြောပြောပေါ့ လူတွေက ကိုယ့်အထင်နဲ့ကိုယ်နေနေတာပဲ... ကိုယ်လဲ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ်ပေါ့... သူဒီလို လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် သူ့အကျိုးပဲဆုတ်ယုတ်သွားတာပဲလေ... ကျွန်မပြိုင်ရန်ဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူး....
မမယ်ကိုး ရေ... ဆုတောင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ဖေဖေကလဲ အစ်မ ဆုတောင်းအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်... အားရင်လဲ အိမ်လာလည်ပါအုံးတဲ့...
မခိုင်ရေ... အစ်မပြောမှပဲ အားရှိသွားပြီ... ညီမက ကိုယ့်စာကိုယ်အားမရဖြစ်နေလို့ မရေးတာတောင် အတော်ကြာပါပြီ... အစ်မက ဘယ်လိုပိုစ့်တွေကို ကြိုက်တာလဲ... ညီမက မင်းသမီး မင်းသား ရုပ်ရှင်အကြောင်းတွေလဲရေးတော့ မကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အားနာတယ်...
အမှန်ကတော့ မင်းသား အကြောင်းလေးတွေ ရေးတာကို ရှာဖတ်ရာက ရောက်လာတာ ဒါပေမယ့် ဖတ်ရင်းနဲ့ ပို့စ်အားလုံးနီးပါး တညလုံးဖတ်မိသွားတာကတော့ ညီမလေးရဲ့ ရေးသားချက်လေးတွေမှာ ပေါ်နေတဲ့ ခံယူချက်လေးတွေက ဖတ်ကောင်းပြီးနှစ်သက်လို့ပါ